Shabaq Ilaalihii Real Madrid Keylor Navas oo Ku Sugan Paris Si uu Tijaabada Cafimaadka ugu Maro Paris Saint-Germain - Bandhiga Media
Shabaq Ilaalihii Real Madrid Keylor Navas oo Ku Sugan Paris Si uu Tijaabada Cafimaadka ugu Maro Paris Saint-Germain
Goolhayaha Real Madrid Keylor Navas ayaa qarka u saaran inuu ku biiro Paris Saint-Germain ka dib markii uu gaaray caasimada Faransiiska Isniintan.
Muuqaal la baahiyay ayaa muujinayay in 32 jirka reer Costa Rica, kaasoo seddex koob oo Champions League la qaaday Real Madrid, isagoo la socda saxxibadii magaalada Paris.
Navas wuxuu raadinaya bilow cusub xagaagan maadaama uu doonayo fursado badan oo kooxda koowaad ah kadib markii uu booska kowaad ee garoonka Bernabeu uu u wayay Thibaut Courtois.
32 jirkan ayaa u soo ciyaaray kooxda reer Spain 104 jeer tan iyo markii uu kaga soo biiray Levante dabayaaqadii sanadkii 2014 isaga oo waliba kula guulaystay hal La Liga iyo seddex koob oo Champions League.
Dhawanahan ayu day dayay xal ku adan booskiisa kadib markii laga door biday ninka reer Bilgium ee Thibaut Courtois kaasi oo kalsoni xoogan ka heysta madaxweynaha kooxda.
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada aya muujinaya xidiga oo ku socdaalaya magalkada Paris,isagoo ay la socdaan xubno u dhaw isaga kuwa oo iyaga qeyb ka ah sdhaqsiyaadka hoiwsha la wada
Waxa si weyn loo dhowraya ku dhawaaqista PSG ee xidigan kaasi ka mid ah xidigaha champions league la hoyday sedex jeer oo xiriir ah,waqtigiisii Real Madrid.